Global Voices teny Malagasy » Jordania : Bilaogera namoaka tsiambaratelom-panjakàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Aogositra 2018 11:05 GMT 1	 · Mpanoratra Anna Gueye Nandika avylavitra
Sokajy: Afganistana, Jordania, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Ao amin'ny bilaoginy ilay Jordaniana bilaogera, Rami Abdelrahman  [amin'ny teny anglisy toy ny rohy rehetra tanisaina ato anaty lahatsoratra] dia manoratra hoe mandray anjara amin'ny ady ao Afghanistàna ny governemantan-dry zareo, ary io ampamoaka nataony io no nahatonga azy ho ambany fanarahamason'ny sampampitsikilovana ao Jordania, satria tsiambaratelom-panjakana narovana fatratra izany.
Izany rehetra izany dia nanomboka, andro vitsy lasa izay, rehefa injay ity mpanao gazety sady bilaogera monina any Soeda ity, namerina namoaka tety anaty aterineto sy naneho hevitra taminà ampahan-dahatsoratry ny gazety The Atlantic , izay miresaka antontan-taratasy iray vao avy novahan'ny OTAN indray tsy ela akory izay, antontan-taratasy iray milaza ny haben'ny fandraisana anjaran'i Jordania tao anatin'ilay “ady fanoherana ny horohoro”.
Ilay antontan-taratasy navoaka tao amin'ny The Atlantic :
… ahitàna an'i Jordania ho anisan'ireo firenena mandrafitra ny hery iraisampirenena ao Afghanistàna, saingy mamoaka ho antsika ihany koa hoe noho ny tahotra hisian'ny fiantraikany avy ao anatiny dia tsy tian'i Jordania ny hamoahana ny fandraisany anjara ho fantatry ny rehetra.
Firenena Arabo iray hafa voatanisa ao anatin'ilay antontan-tartasy ny Emirà Arabo Mitambatra.
Abdelrahman manamarika hoe :
Ilay karazana fifanarahana notehirizina hatry ny elabe ho toy ny tsiambaratelom-panjakana, noho ny fangatahan'ny governemanta jordaniàna, saingy nahafantatra tsara izany kosa ireo mpiaradia hafa rehetra.
Momba io tsiambaratelo tsara mpirina io, manontany tena izy hoe :
…raha toa ny OTAN sy ireo mpiaradia aminy ao Afovoany-Atsinana tsy tafavoaka tsara kokoa tamin'ny fomba mangarahara tamin'izany ka nampahafantatra bebe kokoa an'ireo olompirenena momba ireo fifanarahana izay mety hanaovana ampamoaka amin'izao fotoana izao ? Inona no nilàna nanafina an'io sy nanaovana toy izany, nanomezana fotoana ny avy amin'ny fanoherana mba hieritreretana tantara sy teorianà tsikombakomba ary hamadihana izany ho tantara mora vidy ho an'ny daholobe ? Fa maninona isika, isika izay miaina anaty tontolon'ny fanontoloana, no hitodika any amin'ny fandikàna bontolo rehefa tonga amin'ny fotoana tena maha-zavadehibe ny filàna ny fanohanan'ny vahoaka? Misy valiny ve?
Ny ampitso i Abdelrahman dia namoaka lahatsoratra  iray hafa momba io resaka io ihany, nasiany rohy mankany amin'ny dika PDF amin'ilay antontan-taratasy naverina novohàna hoe ” tsy tian'i Jordania ho fanta-bahoaka”. Ilay antontan-taratasy dia hita ao amin'ny Wikileaks  , tranonkala iray mamoaka ireo vaovao tafaporitsaka  momba ireo raharaha saropady, toerana ety anaty aterineto azo ametrahana antontan-taratasy amin'ny fomba tsy mitonona anarana.
Ilay antontan-taratasy naverin'ny OTAN novahàna indray 
Mampitandrina izy :
Mba hahafahako miaro ny tenako mifanaraka amin'ny lalàna dia avoakako ity antontan-taratasy ity, ary mba tsy hahavery ny fitokisana ahy amin'ny maha-bilaogera sady mpanao gazety, taorian'ny namoahana, andro roa lasa izay, lahatsoratra iray momba ny hoe tsy tian'i Jordania ho fantatry ny vahoakany ny nandraisany anjara tamin'ny ady nifanaovana tamin'i Afghanistàna. Inty  ny rohy mankany amin'ilay lahtsoratra voalohany.
Lazain'i Abdelrahman antsika ihany koa fa misy mpitsidika tsy iriana tonga mikarokaroka ao anatin'ny tranonkalany taorian'ny namoahana ilay lahatsoratra voalohany.
Tamin'ny fomba mahaliana, rehefa nandalina ireo antontanisan'ny fitsidihana ilay bilaogy sy ny anaran'ireo sehatra niavian'ireo mpitsidika, nahita mpitsidika maromaro mahaliana aho, izay ireto ny sasany :
US Army Information Systems Engineering Command, (Foibem-pibakoana Usaisc), in-telo no nitsidika ny tranonkala tamin'ny 24 Martsa 2009, tamin'ny 13:50:24, 13:50:38 sy 13:51:22.
Royal Jordanian Hashemite Court (Rhc) nitsidika in-dray mandeha ny tranonkala tamin'ny 24 Martsa 2009, tamin'ny 15:37:29
Jordanian Intelligence Department (gid.gov.jo ) in-12 (hatreto aloha), ny 24 Martsa 2009 teo anelanelan'ny 17:42:27, sy 18:37
Izy ireo no anisan'ireo mpitsidika tsy manampaharoa marobe omaly sy androany. Sanganehana foana aho manoloana ny zavamisy hoe tsy misy maneho hevitra amin'ny fomba ofisialy ny olona ao amin'io bilaogy io momba izay antony itadiavan'i Jordania hitahiry izany ho tsiambaratelo, nefa takatr'ireo Jordaniàna sy eken'izy ireo ireny fifamatorana ireny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/12/124496/
 Rami Abdelrahman: http://ramiswall.blogspot.com/
 namerina namoaka tety anaty aterineto sy naneho hevitra taminà ampahan-dahatsoratry ny gazety The : http://ramiswall.blogspot.com/2009/03/jordanian-military-forces-in.html
 ireo vaovao tafaporitsaka: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
 Ilay antontan-taratasy naverin'ny OTAN novahàna indray: http://www.wikileaks.org/leak/nato-master-narrative-2008.pdf